ပန်းဦးလွှတ်ပွဲဖြစ်၇ပ်မှန်အကြောင်း – CantWait2Say
Myanmar New October 25, 2017
** ဖြစ်ရပ်မှန် **
သထုံ အလံတရာ နယ်မြေအတွင်းက ပျဉ်းကတိုးကုန်းဆိုတဲ့ ရွာတစ်ရွာမှာ . . .။
တရက်မှာတော့ ဦးလှမင်းအိမ်ရှေ့ကို ခွန်တန့်လူတွေရောက်လာတယ်။
” ဦးလှမင်း . . .. ခင်ဗျားသမီး အငယ်မကို ဘဘုရားက သိဒ္ဓိတင်ဖို့ အခေါ်လွှတ်လိုက်တယ်”ဒီရက်ဘယ်နေ့ရောက်လာမလဲ
ဆိုပြီး ဦးလှမင်း ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ စောင့်နေခဲ့ရတာ ကြာပါပြီ။” ဘာ . .ကျုပ်သမီးက ၁၅နှစ်ဘဲရှိသေးတယ်။ ကျောင်းသူဘဲ
ရှိသေးတယ်။ အသက်လဲ မပြည့်သေးဘူး ။ မထဲ့နိုင်ဘူးဗျ ”ဒီလိုနဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူ ဦးလှမင်း နဲ့ ခွန်တန့်ဆီကလူတွေနဲ့ ဒုတ်ဆွဲ ဒါး
ဆွဲဖြစ်ကြပါလေရော။ မိခင်အရင်းနဲ့ အမဖြစ်သူက ခွန်တန့် ဘက်က။ အမဖြစ်သူကလဲ ပအိုဝ့်ကျောင်းဆရာမ။ ဖခင်ဦးလှမ
င်း ယိုးဒယားမှာ အလုပ်သွားလုပ် နေတုံး မိခင်အရင်းကိုယ်တိုင် ခွန်တန့်ဆီမှာ သိဒ္ဓိတင်ပြီးသား။
” ဒီမှာ ကိုလှမင်း ရှင် ဘဘုရားရဲ့အလိုမ လိုက်ရင် ရှင်ကို ဘုရားက ဒဏ်ခတ်လိမ့်မယ်။
ရှင်သဘောမတူပေမဲ့ ကျမသဘောတူတယ်။ ကျမထဲ့လိုက်မယ် ” မိန်းမဖြစ်သူ ဒေါ်လှစိန်က ဝင်ပြောတယ်။
” ဘာ. .ကွ “
ဦးလှမင်းရဲ့အသံဟာ နွေခေါင်ခေါင်မိုးကြိုး ပစ်ချလိုက်သလို ကျယ်လောင် ပူချစ်နေပါတော့တယ်။
လာခေါ်တဲ့လူရော လာကြည့်တဲ့သူရော မိသားစုတွေပါ အတော်လန့်ဖြန့် သွားကြတယ်။
သားသမီးကို ချစ်လွန်းလှပြီး ကာကွယ်ပေးချင်တဲ့ ဦးလှမင်း ခမျာ ဘာမှ မမြင်နိုင်တော့ဘူး။ သွေးရူးသွေးတန်းနဲ့။ ဒီအချိန်မှာ
အခြေအနေမဟန်တာနဲ့ ခွန်တန့် လူတွေလဲ တပ်ပြန်ခေါက်သွားတော့တယ်။
ဒီလိုနဲ့နေလာလိုက်တာ တရက်ကျတော့ သားဖြစ်သူက လာပြောတယ်။” အဖေ . . အဖေ့သမီး အငယ်မကျောင်းမတက်တာ
လေးငါးရက်ရှိနေပြီ အဖေ “သမီးငယ်က ပျဉ်းကတိုးကုန်းရွာမှာ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းလာဖွင့်တဲ့ ပအို့ဝ်ကျောင်းမှာ တက်နေပါတယ်။
“ဟေ . .ဟုတ်ရဲ့လား သားရဲ့။ မင်းညီမ မနက်တိုင်း ကျောင်းသွားနေတာဘဲလေ”
သားဖြစ်သူက မြို့ကျောင်းတက်ဖူးတယ်။ ရွာထဲမှာ ဘာဖြစ်ဖြစ် သူအကုန်သိတယ်။ အမြင်လဲကျယ်တယ်။ ပြောရင်းနဲ့ ဦးလှ
မင်း စဉ်းစားလိုက်တယ်။ ဒါဆိုသေချာပြီ ခွန်တန့် လက်ချက်ဘဲ။
တွေ့ရာတုတ်တချောင်းဆွဲပြီး ခွန်တန့်ဆီ ဂမူးရှူးထိုး ထွက်လာခဲ့တယ်။ သမီးငယ်ကို လူယုတ်မာလက်ထဲက ကယ်တင်ဖို့ ဦး
လှမင်းရင်ထဲမှာ မီးတောက်နေပြီ။ ဝမ်းနည်းကြေကွဲရတဲ့ ဝေဒနာကို ဦးလှမင်း ကောင်းကောင်းခံစားနေရပြီလေ။
ခွန်တန့်လူတွေက ဆက်မသွားဘို့ တားကြတယ်။
” ငါ့ သမီးငယ် ပြန်ပေး ပြန်ပေးကြပါကွာ “
ဆို့နင့် အက်ကွဲတုန်ရီနေတဲ့ ဦးလှမင်းရဲ့ အသံဟာ ကြားရတဲ့သူတွေအားလုံးကို နာကျင်စေပါတယ်။ သူကိုယ်တိုင်လဲ နှလုံး
နှလုံးးသားမဲ့တဲ့ လူယုတ်မာတွေရဲ့ အားကို မလှန်နိုင်လို့ နောက်ဆုံးတော့ အိမ်ပြန်ခဲ့ရတယ်။
ဆို့နင့်ကြေကွဲခြင်းများစွာနဲ့ တညလုံးအိပ်မရဘူး။ မျက်ရည်တွေလည်းစီးလို့။
ဒါကို ဦးလှမင်းတယောက်ဘဲ သွက်သွက်ခါအောင်ခံစားနေရတယ်။။
သမီးကြီးနဲ့ မ်ိန်းမဖြစ်သူကတော့ တရှူးရှူးနဲ့ အိပ်မောကြနေတယ်။ သူတို့ကတော့ ဘဘုရား အတွက်ဆို အသက်ရော အရှ
က်ပါ ပေးဆပ်ထားပြီးသားဆိုတော့ ဘာမှမခံစားရဘူး ထင်ပါတယ်။
မနက်မိုးလင်းတော့ အိမ်ရှေ့ကို ခွန်တန့် မွေးစားအဖေ ရောက်လာတယ်။
” ဒီမှာ ကိုလှမင်း ခင်ဗျားက ဘုရားနယ်မြေမှာနေပြီး ဘာမှနားမလည်ဘူးလား။ ခင်ဗျားကြောင့် ဘဘုရား စ်ိတ်ဆင်းရဲရတ
ယ်။ အခု ဆွမ်းတောင် မစားတော့ဘူး။ ခင်ဗျားကို ဘုရားရိုက်မယ် “
” ဘာ ဘုရားလဲ။ သူများအသိုက်အမြုံကို ပြိုကွဲအောင် လုပ်တာ ဘုရားလား။ ဘုရားက ဒီလို အလုပ်မျိုး မလုပ်ဘူးး။ ဘ
ဘုရားက ကျုပ်ကြောင့် ဆွမ်းမစားဘူးဆ်ို ကျုပ်လိုက်မေးမယ် “
” ဘဘုရား အလုပ်များတယ်။ မင်းလိုက်တွေ့လို့ မရဘူး။ ဘဘုရားစိတ်ချမ်းသာအောင်။ ခင်ဗျားသမီးကို ခေါ်ထားရလိမ့်မ
ယ်။ အဲဒါ ကျုပ်လာပြောတာ “
” ဘယ်မှာလဲ ကျုပ်သမီး။ မပေးနိုင်ဘူး။ ပြီးရင် ခင်ဗျားတို့ စွန့်ပစ်ရင် ကျုပ်သမီး သောင်ပြင်လွှတ်တဲ့ခွေးလို ဒုက္ခရောက်မှာ။
ကျုပ် သိတယ် မပေးနိုင်ဘူး “
ပြောရင်း ဦးလှမင်း ဒေါသလည်းဖြစ် မျက်ရည် တွေလည်း ကျလို့ နေပါပြီ။ အသားတွေလဲ တဆတ်ဆတိတုန်လို့ နေတယ်။
ကျုပ်က ဘုရားအလိုကျ လာပြောတာ ဦးလှမင်း ။ ခင်ဗျား စဉ်းစားပါ ”ခွန်တန့်မွေးစားအဖေရဲ့ အသံ ဦးလှမင်းနာထဲ ခါး
ဒေါသက ငယ်ထိပ်ရောက်ပြီ ။
” ကျုပ် ဘာမှစဉ်းစားစရာ မလိုဘူး။ တခါထဲ အဖြေပေးလိုက်မယ် ။ ဒီည၈နာရီမကျော် စေနဲ့။ ကျုပ်သမီးကို ပြန်ပို့။ မပို့လို့ကတော့ ကျုပ် ရဲတိုင်မယ်။ ကျုပ်အကြောင်းသိစေရမယ် “
သမီးဇောမွှန်နေတဲ့ ဦးလှမင်းရဲ့ ဒေါသအပြည့်နဲ့ စကားသံ ။ တကယ်လုပ်မဲ့ပုံကြောင့် ခွန်တန့်မွေးစားအဖေလဲ မွေးစားအဖေ
လဲ လှည့် ပြန်သွားတော့တယ်။
ည၈ နာရီလောက်မှာ သမီးငယ် အိမ်ပြန်ရောက်လာပါတယ်။
သမီးငယ်ကိုကြည့်ပြီး ဦးလှမင်း ရင်ထဲ ကြေကွဲနေတယ် ရင်ထဲမှာ မျက်ရည်ကျနေတာ ဘယ်သူမှ မသိနိုင်ပါဘူး။
“ဒီမှာ ကိုလှမင်း ရှင် ဘုရားမကြိုက်တာလုပ်လို့
ရှင့်ကို ကျမ မပေါင်းနိုင်တော့ဘူး ကွာမယ် “
ဇနီးသည် ဒေါ်လှစိန်က တစခန်းထလာပါတော့တယ်။
” အေး – ကွာ – ရတယ်။ ငါ့သမီးကို လူယုတ်မာ လက်ထဲ မထဲ့ ရရင် ပြီးရော ။ ကွာ ချင်သလောက် ကွာ “
ီဦးလှမင်း ပေါက်ကွဲနေပါပြီ။ မိန်းမနဲ့ သူတခွန်း ငါတခွန်းဖြစ်ကြပြီ။ သမီးကို ချစ်လွန်းတဲ့ ဦးလှမင်း ဒေါသရေချိန်တက်ပြီ။ ဒေါ်
လှစိန်ကို ရိုက်ပုတ်ဖို့ ဝန်မလေးတော့။
“အဖေ သမီးလဲ ခွန်တန်နဲ့ တောင်ကြီးကို လိုက်သွားမယ်
လက်ဟန်ပြင်နေတုံး ကြားလိုက်ရတဲ့ သမီးငယ်ရဲ့ အသံ
” ဘာ. . . “
ငယ်ထိပ် မြွေပေါက်လိုက်သလို ပါဘဲ။ ဒိန်းကနဲကြယ်တွေ လတွေမြင်ပြီး ဦးလှမင်း ခမျာအ
ရုပ်ကြိုးပြတ် လဲကျ သွားပါတော့တယ် ခင်ဗျား။ ။
အချုပ်ပြောရရင် . .
ဦးလှမင်းကို သူ့မိန်းမကမပေါင်းတော့ပါဘူး။ မိသားစုကလဲ လက်မခံတော့ဘူး။ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ( ပအို့ဝ် အုပ်ကြီး)
ဦးဝင်ရွှေ(နံမယ် အမှန်) ကိုယ်တိုင်က ခွန်တန့်ဘက်က ။ ခွန်တန့်လူဆိုတော့ သွားပြီပေါ့ဗျာ ။ တရွာလုံးနဲ့ တယောက်ဆိုေ
တာ့ ရွာမှာလဲ မနေရဲတော့ဘူး။ ပြေးနေရပြီ။
ဦးလှမင်းကလဲ ဒီဖြစ်ရပ်တွေကို အကုန်ပြောပြချင်နေပါတယ်။သူပြောလို့လဲ ကျနော် ပြန်ရှယ်နိုင်တာပါ။
ဒီဇတ်လမ်းကို တာဝန်ရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ သိပြီးသား ဖြစ်လို့ထင်တယ်။ အခုဆို ဦးလှမင်းက သူ့အသက်အန္တရာယ် စိုးရိမ်နေရ
လို့ ရွာစဉ်လှဲ့ပြီ နေနေရတယ်။ ဘုန်းကြီးကျောင်း တွေမှာလှဲ့ပြီး ညအိပ်နေရတယ်။
၂၀၁၇ အောက်တိုဘာ ၂၃ နေ့အထိ သူ့လုံခြုံရေးကို ကာကွယ်ပေးမဲ့ အစိုးရအဖွဲအစည်း မရှိသေးဘူး။တာဝန်ရှိတယ်လို့ ထ
င်ရတဲ့ အစိုးရ လူကြီးမင်းတွေနဲ့ အမတ်မင်းတွေကတော့ ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာ အဖြေရသေးပုံမပေါ်သေးဘူး။ ခေါင်းကို
ဒါနဲ့ဘဲ လူသတ်မှု တခုတိုးလာတော့မယ်။ ဦးလှမင်းသာ အသတ်ခံခဲ့ရရင် တရားခံက ” အစိုးရ ” ဘဲ ဖြစ်လိမ့်မယ်။
ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး . . .မေးစရာရှိတယ်။
(1) အဓိသက်သေမရှိလို့ ရဲက အမှုမဖွင့်နိုင်ဘူး လို့ သိရတယ်။ မိန်းခလေးတွေကလဲ ကြောက်ကြလို့ သက်သေ မထွက်တာ
လဲ ရှိနိုင်တယ်။ လုံခြုံရေး တာဝန်မယူပေးနိုင်ဘူးလား
(2) တိုင်းသိ ပြည်သိကိစ္စ ဖြစ်နေပြီ။ ကြောက်လို့ မတိုင်ရဲ သက်သေမလိုက်ရဲရင် ဒီလိုဘဲ ထားလိုက်မှာလား။ အစိုးရက စုံစ
မ်းဖော်ထုတ်ဘို့ တာဝန်မရှိဘူးလား ။
2005 ထဲက ဖြစ်နေတာနော် ။ ရဲက ဘာသတင်းမှ မရဘူးလား။
(3) တိုင်တဲ့သူ မရှိလို့ ဘာမှမလုပ်တာပါ ဆိုရင်
( 4) ဘာမဟုတ်တဲ့လူမိုက်တစု လုပ်တာကို
ဟိုဟာဒီဟာ အကြောင်းပြပြီး မထိရဲ မကိုင်ရဲတာ အစိုးရက ကြောက်နေလို့လား။
ကြောက်နေရင်လဲ အစိုးရ လုပ်မနေနဲ့တော့။
စာပြီးချိန်- ၂၀၁၇ အောက်တိုဘာ ၂၅ က် မနက် ၄နာရီ ၅ မိနစ်
အီဂဈြနဲ့ ရောမလူမြိုးမြားဟာ သူတို့ရဲ့ အလှအပဆိုငျရာ နညျးပညာတှထေဲမာ ငှကျပြောသီးအသုံး လညျး ပါပါတယျ။ ငှကျပြောသီးထဲမှာ အမီနို အကျဆဈပါဝငျကွောငျး အထကျမှာ ဖျောပွပွီးသှားပါပွီ။ အမီနို အကျဆဈဟာ အသားအရနေဲ့ ဆံကသောအတှကျ အရမျးအကြိုး ရှိစပေါတယျ။ ဆံသားကို ပြော့ပွောငျးစပွေီး ဗီတာမငျအေ၊ ဘီ၊ စီ တို့လညျး ပါဝငျတဲ့အတှကျ ဆံပငျနှဈခှ ဖွဈခွငျးမှ ကာကှယျပေးပါတယျ။ငှကျပြောသီး သကျသကျကို အခှံခှာပွီး ဆံပငျကို ပှတျပေးပါ။ ပွီးရငျ ခဏစောငျ့ပွီး မှ ရနေဲ့ ပွနျလြှျောပေးပါ။ Conditioner သုံးစရာမ လိုအောငျ ဆံပငျဟာ တောကျပွောငျ၊ နူးညံ့ ရှနျးစိုစပေါတယျ။
အကြမ်းဖက် သမား ၄၀၀ကျော် ကို ကင်းသမား ဆယ်ယောက်နဲ့ ခံချတဲ့ မြန်မာ့တပ်မတော် ဗိုလ်လေး
အကြမ်းဖက် သမား ၄၀၀ကျော် ကို ကင်းသမား ဆယ်ယောက်နဲ့ ခံချတဲ့ မြန်မာ့တပ်မတော် ဗိုလ်လေး ကျွန်တော်တို့တည်းတဲ့ဘုန်းကြီးကျာင်းမှာ ထမင်းစားချိန်တိုင်းထမင်းစားခန်းရဲ့ပြူတင်းပေါက်နံရံတွေဆီ လုံခြုံရေးရဲတွေအမြဲစောင့်နေတတ်ကြတယ် ။ ဘာရှိနေလို့လဲမသိလို့မေးကြည့်တော့မှ ဒီဘက်လာလာတိုက်တာအဲ့ဘက်mုလားရွာဘက်ကလို့ လုံခြုံရေးယူထားတဲ့ရဲသားကြီးကလက်ညိုးထိုးပြတယ် ။ တည်းခိုတဲ့ဘုန်ကြီးကျောင်းနဲ့ လက်ညှိုးထိုးပြတဲ့ mုလားရွာက လမ်းလေးတလမ်းနဲ့ ပုဇွန်ကန်လေးတကန်ပဲခြားတယ် လွန်ရောကိုက်တထောင်ပေါ့ ။ ဘုန်းကြီးကျောင်းရဲ့မျက်စောင်းထိုးမှာ …